Mya Sein Taung
"ဆွမ်းကျိုးတုံ့ ပြန်၊ မြတ်မွေခံ၊ ရှုရန်မြတ်ဆရာ"
ဆွမ်းအလှူရှင်တွေရဲ့ ကျေးဇူးကို တရားနဲ့ကျေးဇူးဆပ်ရမှာ။
၀ိပဿနာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အကျင့်တွေကျင့်ပြီး ကျေးဇူး ဆပ်တာပဲ။
မြတ်မွေခံ၊ တရားကို ကြိုးကြိုးစားစား အားထုတ်မှ တရားအမွေခံလို့ရမှာပေါ့။
ရှုရန်မြတ်ဆရာ၊ ကျေးဇူးအများဆုံး ဆရာကတော့ ဘုရားပဲ။
ဘုရားဟောလို့သာ အသိမှန်၊ အကျင့်မှန်တာလေ။
မြစိမ်းတောင်တောရ ဆရာတော် အရှင်ဇာနေယျ။
မြစိမ်းတောင်တောရရိပ်သာမှာ မြို့ပြနှင့်အလှမ်းဝေးကာ ဆိတ်ငြိမ်ရာရိုးမတောထဲတွင်တည်ရှိသဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လွယ်ကူသော အခြားရိပ်သာများနှင့် ယှဉ်လျှင် အလှူရှင်များ အရောက် အပေါက်နည်းပါသည်။ ထို့အတွက် ဤကဲ့သို့ လစဉ်ပေးပို့သော ဆွမ်းအလှူငွေများနဲ့ သာရပ်တည် နေရပါသည်။
တရားအားထုတ်သူ ယောဂီများပြားလာသည်နှင့်အမျှ ဆွမ်းစရိတ်မှာလည်း လစဉ်ပိုမို လိုအပ််လျှက် ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲချို့တဲ့စွာ တရားအား ထုတ်နေကြသည့် ရဟန်း သံဃာတော်များ၊ သီလရှင်များနှင့် ယောဂီများအား မြစိမ်းတောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ စင်္ကာပူရှိ ယောဂီ ဟောင်းများနှင့် ဓမ္မမိတ််ဆွေ များမှ ဦးဆောင်ကာ ဆွမ်းစရိတ်အလှူငွေများ လစဉ်ထောက်ပံ့ လျှက်ရှိ ပါသည်။ မိတ်ဆွေများ အနေ ဖြင့်လည်း ကျနော်၊ ကျမ တို့နှင့်အတူ ကုသိုလ်ပါဝင်လိုပါက လှူဒါန်းလို သောလတွင် အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ ထံဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်၊ နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်၊ ရည်စူးအလှူ အစရှိသဖြင့်လည်း လှူဒါန်း လိုပါက လည်း အများသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြရန် ဖော်ပြပေး သွားပါမည်။
POSB saving Account ၀၂၄-၄၇၀၃၄-၂
မကျော့ကျော့ ခိုင် (+65-9844 6120)
ကိုအောင်ပြည့်စုံအေး (+65-9119 7361)
ကိုဇော်မိုးစံ (+65-91714350)/ (+959-5418462- 06-10-2014 နေ့ နောက်ပိုင်း)
ြမန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့တွင်နေထိုင်သူများ လစဉ် ဆွမ်းစရိတ် လှူဒါန်းလိုပါက ဦးအောင်ဝင်း၊ ဦးတူး (09-49321386/01-8500190) ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ လိုအပ်လျှင် အိမ်တိုင်ရာရောက် အလှူငွေ လာရောက်ကောက်ခံပေးနိုင်ပြီး လစဉ်အလှူငွေ ကောက်ခံရရှိမှု မှတ်တမ်းကို လစဉ် ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ အခုလောလောဆယ်တွင် website တွင် မဖော်ပြနိုင်သေးပါ။
အလှူ ငွေ များ ကို လစဉ် လ ကုန် ရက် ၌ ပေး ပို့ လှူ ဒါန်း ပါ မည်။ ကုသိုလ်ဒါန ပါဝင်လို ပါက ဖော်ပြပါ Account No. သို့လှူဒါန်းငွေလွှဲ၍မိမိအမည် နှင့် ငွေ ပမာဏ တို့ကို SMS ပို့ပြီး လှူ ဒါန်း နိုင် ပါ သည်။
လစဉ်ဆွမ်းအလှူငွေများကို လှူဒါန်းရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူမှု ရှိစေရန် ၂လစာဖြစ်စေ၊ ၃လစာ ဖြစ်စေ၊ ၆လစာဖြစ်စေ အစရှိသဖြင့် မိမိအဆင်ပြေသလို ကြိုတင်လှူဒါန်းထားပါက မှတ်သား ထားပြီး လစဉ် ပုံမှန် လှူဒါန်းပေးပါမည်။
အလှူရှင်များအနေဖြင့် (တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ လိမ္မော်ကျေးရွာရှိ) မြစိမ်းတောင်ရိပ်သာတွင် မိမိတို့၏ မွေး နေ့၊ အထိမ်းအမှတ်နေ့၊ ရည်စူးအလှူ စသည်များအတွက်် အာရုဏ်ဆွမ်း (သို့မဟုတ်) နေ့ဆွမ်း တရက်စာ ဆပ်ကပ်ကုသိုလ်ပြုလှူဒါန်းလိုပါက
အာရုဏ်ဆွမ်း + အချို ပွဲအချို့ ၁သိန်း
အာရုဏ်ဆွမ်း + အချိုပွဲအစုံအလင် ၁သိန်းခွဲ
နေ့ဆွမ်း + အချိုပွဲ အချို့ ၂ သိန်း
နေ့ဆွမ်း + အချိုပွဲအစုံအလင် ၂ သိန်းခွဲ
(လှူဒါန်းချိန် ဒေါ်လာပေါက်စျေးနှင့် တွက်ချက်ပြီး လှူဒါန်းနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးပါမည်။)
လှူဒါန်းလိုသူများသည် လှူဒါန်းလိုသည့်ရက်ကို အနည်းဆုံး (၂) ပတ်ခန့်ကြိုတင်အကြောင်းကြား ပေးပါ ရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ထိုအလှူသည် ရဟန်း၊ သီလရှင် နှင့် ယောဂီ စုစုပေါင်း ၂၂၀ ခန့် အတွက် တနပ်စာ ဆွမ်းအလှူဖြစ်ပါသည်။ လှူဒါန်းသည့်နေ့ တွင် အလှူရှင် ကိုယ်တိုင် လာရောက် နိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မလာနိုင်သည်ဖြစ်စေ ရဟန်း၊ သီလရှင်၊ ယောဂီအားလုံးက အလှူရှင်နှင့် ရည်စူး ပုဂ္ဂိုလ်များ ဝေနေယျ သတ္တဝါအားလုံးကို မေတ္တာပို့အမျှဝေပေးပါသည်။
လှူဒါန်းမှုများကို သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ရန် အလှူလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကို ဆွမ်းအလှူခံဖြတ်ပိုင်းနေရာတွင် တင်ပြ ပေးထားပါမည်။ ၁ နှစ် (၁၂လ) ကြိုတင် ပြီးစာရင်းပေးထားနိုင်ပါသည်။ မြစိမ်းတောင် ကျောင်းရုံးခန်း သို ့လည်း တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ရုံးခန်းဖုန်း (၁) ၀၉-၄၂၀၀၁၈၈၇၇၊ (၂) ၀၉-၄၉၃၁၂၃၀၀၊ (၃) ၀၅၅-၂၀၃၄၁
ဆွမ်းတနပ်စာ လှူဒါန်းသူများစာရင်းကုိ	ဤနေရာတွင် ကြည့်ပြီး သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါသည်။
ဆွမ်းတနပ်စာ လှူဒါန်းမှုများအတွက် ဆွမ်းအလှူဖြတ်ပိုင်းများကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုပြီး သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါသည်။
(လစဉ်ဆွမ်းစရိတ်အပြင် အထက်ဖော်ပြပါ အလှူရှင်များကဲ့သို့ဆွမ်းတနပ်စာပါ သီးသန့် လှူဒါန်း ကြသဖြင့် သာမန်အားဖြင့် အများစာ အဆင်ပြေသလို ဆွမ်းကိစ္စ စီစဉ်နေရာမှ ယခုလိုလှူဒါန်းသည့် ရက်များတွင် ပြည့်ပြည့် စုံစုံ စီစဉ်နိုင်၍ အလွန်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်နေကြကြောင်း ကျောင်းရုံးခန်းမှ တဆင့်ကြား သိရပါသည်။ )
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( May 2022)
ကိုမျိုးအောင်စန်း+မကျော့ကျော့ခိုင် သမီး စောရဒီယာ
ကိုထွန်းမြတ်မိုး+မခင်ညိုနု သား အောင်ကောင်းကောင်း
ကိုဇော်မိုးစံ+မသန်းသန်းဌေး သမီး စုသီရိစံ (ဟုန်ဟုန်)
ကိုဝင်းလှိုင် + မမဥ္ဇူအုန်း မိသားစု
ဦးဇော်မြင့်+ ဒေါ်အေးအေးမြင့် သမီး မအေးချမ်းမြတ်၊ မဆုပန်ထက် မိသားစု
Alex Liu Aung Kyaw+ မမြမြဌေး သမီး Liu Bao Xia
ဦးအေးကျော်+ဒေါ်တင်တင်မြ သမီး သက်ခိုင်ဇင်
ကွယ်လွန်သူ မိဘ ၂ ပါးအားရည်စူး၍ သား- မောင်အောင်ပြည့်စုံအေး
မခင်သက်သက်ငြိမ်းနှင့် တူမ မနွယ်ရည်မွန်လင်း
Ko Nay Yu
ကိုမင်းခင်မောင် + မသီသီမာ သမီး မ မနောဖြူ
ဦးရဲဝင်း + ဒေါ်အေးအေးမူ (မိသားစု)
ကိုဌေးလှိုင်ဦး + မကြူကြူသင်း သား ရဲနိုင်ဦး
ဒေါ်မြဦး, မဖြူဇာခိုင် မိသားစု
ဦးနော်ခမ်းအား အမှူးထား၍ ကိုမျိုးခိုင်စိုး+ မအေးစုမွန် သား ကောင်းဉာဏ်ဟိန်း၊ ဘုန်းသစ်ဟိန်း မိသားစု
ကိုမျိုးမင်းဝင်း+မဇင်မာဝင်း သမီး ချမ်းမြသာယာ မိသားစု
၄၀ ကိုကျော်ရွှေအောင် + မလင်းလဲ့ဖြူအောင်ချို သား ဟိန်းဒီပါအောင်
၄၁ ဦးလှရွှေ+ဒေါ်မြဝေ မိသားစု
၄၃ ဦးစံမာ+ဒေါ်ဒေါင်း သမီး မဝင်းဝင်းမြင့် မိသားစု
၄၅ ကိုမင်းထွဋ် ဝင်း + မချိုနှင်းအေး
၄၆ ကိုသစ်လွင်ထွန်း+မယဉ်သော်တာ သား သော်ဇေထွန်း
၄၇ ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင်တင်ခိုင်
၄၈ ကိုထွန်းအောင်ကျော် + မစောမြင့်သွယ် ၊သား ထက်မြက်ထွန်း မိသားစု
၄၉ ကိုလှမျိုးဦး + မချိုချိုမာ
၅၀ Archi group
၅၂ ကိုတင်အောင်ထူး+ မသဲမြတ်စု
၅၃ မတင်တင်ခိုင်၊ မကျင်ကျင်ရီ၊ ကိုခိုင်ဇော်ထက်
၅၅ ဦးမြင့်သောင်း+ ဒေါ်မူမူအောင်
၅၆ ဦးအောင်မိုး+ ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သားမင်းဟိန်းအောင်၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု
၅၇ နှစ်ဘက်သောမိဘများအမှုးထား၍ ကိုမြတ်သူအေး +မဇင်မာဝင်း သားရဲရင့်မြတ်သူ
၅၈ ကိုကျော်ဇင်ဦး + မမိုးမိုးကျော် သမီး မိုးဦးနှင်းစက် နှင့် ဝင်းလဲ့ မိသားစု
၆၀ ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်တင်ဆွေ ကောင်းမှု (လစဉ် ၄ ရက်နေ့ဆွမ်းအလှူ )
၆၁ Mr Seow Kong Sem+မကြည်စိုး
၆၂ ဦးလှဝင်း+ဒေါ်စန်းမြင့်ကြည် သမီး မြတ်ရည်မွန် ၊ မြတ်ရတနာအောင်
၆၃ ဦးဝင်းတင်+ ဒေါ်လှလှသန်း မိသားစု
၆၄ ကိုတင်ထွန်းတိုး + မမော်မော်ဝင်း
၆၅ ကိုဝင်းသူရရှိန် မလင်းဇာခြည် သမီးနွေးနေခြည်ရှိန် သား နေ့သစ်လင်းရှိန် မိသားစု
၇၀ Daw Thi Thi Hlaing
၇၆ ဦးဇော်ဝင်းအောင် နှင့် ဒေါ်စီစီဝင်း မိသားစု
၇၇ ဒေါ်သိန်းနု မောင်နှမများ နေပြည်တော်
၈၀ U Soe Myint +Daw Mya Ngwe family
ဦးခင်မောင်မြင့် သမီး ခင်စန္ဒာဆွေ ၅၀
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( April 2022)
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( March 2022)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ =၃၂၆၀၀၀၀ ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
ကိုမျိုးခိုင်စိုး+ မအေးစုမွန် သား ကောင်းဉာဏ်ဟိန်း၊ ဘုန်းသစ်ဟိန်း မိသားစု
ဦးခင်မောင်မြင့် သမီး ခင်စန္ဒာဆွေ ၁၅၀
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( FEB 2022)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ =၂၉၄၅၈၀၀ ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( Jan 2022)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ =၂၈၄၇၅၀၀ ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( December 2021)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ =၂၇၃၇၀၀၀ ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
၄၆ ကိုမင်းထွဋ် ဝင်း + မချိုနှင်းအေး
၄၇ ကိုသစ်လွင်ထွန်း+မယဉ်သော်တာ သား သော်ဇေထွန်း
၄၈ ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင်တင်ခိုင်
၄၉ ကိုထွန်းအောင်ကျော် + မစောမြင့်သွယ် ၊သား ထက်မြက်ထွန်း မိသားစု
၅၀ ကိုလှမျိုးဦး + မချိုချိုမာ
၅၁ Archi group
၅၃ ကိုတင်အောင်ထူး+ မသဲမြတ်စု
၅၄ မတင်တင်ခိုင်၊ မကျင်ကျင်ရီ၊ ကိုခိုင်ဇော်ထက်
၅၆ ဦးမြင့်သောင်း+ ဒေါ်မူမူအောင်
၅၇ ဦးအောင်မိုး+ ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သားမင်းဟိန်းအောင်၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု
၅၈ နှစ်ဘက်သောမိဘများအမှုးထား၍ ကိုမြတ်သူအေး +မဇင်မာဝင်း သားရဲရင့်မြတ်သူ
၅၉ ကိုကျော်ဇင်ဦး + မမိုးမိုးကျော် သမီး မိုးဦးနှင်းစက် နှင့် ဝင်းလဲ့ မိသားစု
၆၀ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုထွန်းလွင်+ မအေးအေးမြင့်၊ သမီး နှင်းနန္ဒာလွင်၊ အေးသီတာလွင် မိသားစု
၆၂ ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်တင်ဆွေ ကောင်းမှု (လစဉ် ၄ ရက်နေ့ဆွမ်းအလှူ )
၆၃ Mr Seow Kong Sem+မကြည်စိုး
၆၄ ဗိုလ်မှုး လင်းလင်းထက် + မသီတာဝင်း
၆၅ ဦးဝင်းတင်+ ဒေါ်လှလှသန်း မိသားစု
၆၆ ကိုတင်ထွန်းတိုး + မမော်မော်ဝင်း
၆၇ ကိုဝင်းသူရရှိန် မလင်းဇာခြည် သမီးနွေးနေခြည်ရှိန် သား နေ့သစ်လင်းရှိန် မိသားစု
၇၂ Daw Thi Thi Hlaing
၇၈ ဦးဇော်ဝင်းအောင် နှင့် ဒေါ်စီစီဝင်း မိသားစု
၇၉ ဒေါ်သိန်းနု မောင်နှမများ နေပြည်တော်
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( November 2021)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ =၂၆၂၇၀၀၀ ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( October 2021)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ =၂၇၀၆၅၀၀ ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
၈၂ Ko Moe Thu (Puma Energy)
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( September 2021)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ =၃၂၀၈၀၀၀ ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
၇၆ ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်တင်ဆွေ ကောင်းမှူ (လစဉ် ၄ ရက်နေ့ဆွမ်းအလှူ)
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( August 2021)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ =၂၆၀၅၀၀၀ ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( July 2021)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ =၂၃၀၈၅၀၀ ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( June 2021)
၇၄ ဦးခင်မောင်မြင့် သမီး ခင်စန္ဒာဆွေ
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( May 2021)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ =၂၅ သိန်းကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
၄၉ ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင်တင်ခိုင်
၅၀ ကိုထွန်းအောင်ကျော် + မစောမြင့်သွယ် ၊သား ထက်မြက်ထွန်း မိသားစု
၅၁ ကိုလှမျိုးဦး + မချိုချိုမာ
၅၂ Archi group
၈၂ Aung Nyint Win
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( April 2021)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ =၂၅၇၇၅၀၀ ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
၅၄ ကိုတင်အောင်ထူး+ မသဲမြတ်စု
၅၅ မတင်တင်ခိုင်၊ မကျင်ကျင်ရီ၊ ကိုခိုင်ဇော်ထက်
၅၇ ဦးမြင့်သောင်း+ ဒေါ်မူမူအောင်
၅၈ ဦးအောင်မိုး+ ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သားမင်းဟိန်းအောင်၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု
၅၉ နှစ်ဘက်သောမိဘများအမှုးထား၍ ကိုမြတ်သူအေး +မဇင်မာဝင်း သားရဲရင့်မြတ်သူ
၆၀ ကိုကျော်ဇင်ဦး + မမိုးမိုးကျော် သမီး မိုးဦးနှင်းစက် နှင့် ဝင်းလဲ့ မိသားစု
၆၁ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုထွန်းလွင်+ မအေးအေးမြင့်၊ သမီး နှင်းနန္ဒာလွင်၊ အေးသီတာလွင် မိသားစု
၆၄ Mr Seow Kong Sem+မကြည်စိုး
၆၅ ဗိုလ်မှုး လင်းလင်းထက် + မသီတာဝင်း
၆၆ ဦးဝင်းတင်+ ဒေါ်လှလှသန်း မိသားစု
၆၇ ကိုတင်ထွန်းတိုး + မမော်မော်ဝင်း
၆၈ ကိုဝင်းသူရရှိန် မလင်းဇာခြည် သမီးနွေးနေခြည်ရှိန် သား နေ့သစ်လင်းရှိန် မိသားစု
၇၃ Daw Thi Thi Hlaing
၇၅ ဦးခင်မောင်မြင့် သမီး ခင်စန္ဒာဆွေ
၈၀ ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်တင်ဆွေ ကောင်းမှူ (လစဉ် ၄ ရက်နေ့ဆွမ်းအလှူ)
၈၂ ဦးဇော်ဝင်းအောင် နှင့် ဒေါ်စီစီဝင်း မိသားစု
၈၃ ဒေါ်သိန်းနု မောင်နှမများ နေပြည်တော်
၈၇ Aung Nyint Win
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( March 2021)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ =၂၃၇၁၀၀၀ ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
၅၆ ဦးဝေလွင်ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်သမီးကြီးPrimrose သမီးငယ်ချယ်ရီဝေမိသားစု
၅၈ ဦးမြင့်သောင်း+ ဒေါ်မူမူအောင်
၅၉ ဦးအောင်မိုး+ ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သားမင်းဟိန်းအောင်၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု
၆၀ နှစ်ဘက်သောမိဘများအမှုးထား၍ ကိုမြတ်သူအေး +မဇင်မာဝင်း သားရဲရင့်မြတ်သူ
၆၁ ကိုကျော်ဇင်ဦး + မမိုးမိုးကျော် သမီး မိုးဦးနှင်းစက် နှင့် ဝင်းလဲ့ မိသားစု
၆၂ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုထွန်းလွင်+ မအေးအေးမြင့်၊ သမီး နှင်းနန္ဒာလွင်၊ အေးသီတာလွင် မိသားစု
၆၅ Mr Seow Kong Sem+မကြည်စိုး
၆၆ ဗိုလ်မှုး လင်းလင်းထက် + မသီတာဝင်း
၆၇ ဦးဝင်းတင်+ ဒေါ်လှလှသန်း မိသားစု
၆၈ ကိုတင်ထွန်းတိုး + မမော်မော်ဝင်း
၆၉ ကိုဝင်းသူရရှိန် မလင်းဇာခြည် သမီးနွေးနေခြည်ရှိန် သား နေ့သစ်လင်းရှိန် မိသားစု
၇၄ Daw Thi Thi Hlaing
၇၅ ကွယ်လွန်သွားသော အဘိုးအဘွားနှင့် မိဘနှစ်ပါး အားရည်စူး၍ ကိုစန်းအေး
၇၇ ဦးသန်းမြင့်ဦး-ဒေါ်ရီရီနိုင် သမီး မအေးမြတ်မွန်မိသားစု
၇၈ ဦးခင်မောင်မြင့် သမီး ခင်စန္ဒာဆွေ
၈၃ ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်တင်ဆွေ ကောင်းမှူ (လစဉ် ၄ ရက်နေ့ဆွမ်းအလှူ)
၈၅ ဦးဇော်ဝင်းအောင် နှင့် ဒေါ်စီစီဝင်း မိသားစု
၈၆ ဒေါ်သိန်းနု မောင်နှမများ နေပြည်တော်
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( Feb 2021)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ =၂၄၅၂၀၀၀ ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
၇၄ Ng Chee Chong + မဖြူဖြူသွင် son Ng Kai
၇၅ Daw Thi Thi Hlaing
၇၈ ကွယ်လွန်သွားသော အဘိုးအဘွားနှင့် မိဘနှစ်ပါး အားရည်စူး၍ ကိုစန်းအေး
၇၈ ဦးသန်းမြင့်ဦး-ဒေါ်ရီရီနိုင် သမီး မအေးမြတ်မွန်မိသားစု
၇၉ ဦးခင်မောင်မြင့် သမီး ခင်စန္ဒာဆွေ
၈၄ ကွယ်လွန်သူ ဒေါ်တင်ဆွေ ကောင်းမှူ (လစဉ် ၄ ရက်နေ့ဆွမ်းအလှူ)
၈၆ ဦးဇော်ဝင်းအောင် နှင့် ဒေါ်စီစီဝင်း မိသားစု
၈၇ ဒေါ်သိန်းနု မောင်နှမများ နေပြည်တော်
၈၈ ကိုထွန်းလင်းကျော်+မကေခိုင်အောင် သမီး ခိုင်ဖူးအိမ်
၈၉ ကိုအောင်မျိုးမောင်မောင်+မစုနန္ဒာ သမီး အိန္ဒြေကြည်စင်
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း ( Jan 2021)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ =၂၄၁၅၀၀၀ ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
၈၅ ကိုစိုင်းနေလင်းထွန်း+မစမ်းစမ်းေ၀ သမီး အင်ကြင်းဖြူ မိသားစု
၈၇ ဦးဇော်ဝင်းအောင် နှင့် ဒေါ်စီစီဝင်း မိသားစု
၈၈ ဒေါ်သိန်းနု မောင်နှမများ နေပြည်တော်
၈၉ ကိုထွန်းလင်းကျော်+မကေခိုင်အောင် သမီး ခိုင်ဖူးအိမ်
၉၀ ကိုအောင်မျိုးမောင်မောင်+မစုနန္ဒာ သမီး အိန္ဒြေကြည်စင်
၉၂ Lim & Family
၉၃ Renee & Family
၉၄ ဦးခင်ဇော်။ဒေါ်မြမြဝင်း သား ကိုဘုန်းမြင့်ကျော်
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း (December 2020)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ =၂၂၅၆၀၀၀ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
၃၉ ကိုကျော်ရွှေအောင် + မလင်းလဲ့ဖြူအောင်ချို သား ဟိန်းဒီပါအောင်
၄၀ ဦးလှရွှေ+ဒေါ်မြဝေ မိသားစု
၄၂ ဦးစံမာ+ဒေါ်ဒေါင်း သမီး မဝင်းဝင်းမြင့် မိသားစု
၅၅ ကိုမြစိုး+ နန်းအေးခိုင် သား ကောင်းမင်းခန် ့
၅၆ ဦးလုံးစိန်+ ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု ကောင်းမှု
၅၇ ဦးဆွန်ဆီဟုန် + ဒေါ်တင်ကြည် သမီးမကေသူလင်း
၅၈ ဦးဝေလွင်ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်သမီးကြီးPrimrose သမီးငယ်ချယ်ရီဝေမိသားစု
၆၀ ဦးမြင့်သောင်း+ ဒေါ်မူမူအောင်
၆၁ ဦးအောင်မိုး+ ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သားမင်းဟိန်းအောင်၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု
၆၂ နှစ်ဘက်သောမိဘများအမှုးထား၍ ကိုမြတ်သူအေး +မဇင်မာဝင်း သားရဲရင့်မြတ်သူ
၆၃ ကိုကျော်ဇင်ဦး + မမိုးမိုးကျော် သမီး မိုးဦးနှင်းစက် နှင့် ဝင်းလဲ့ မိသားစု
၆၄ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုထွန်းလွင်+ မအေးအေးမြင့်၊ သမီး နှင်းနန္ဒာလွင်၊ အေးသီတာလွင် မိသားစု
၆၅ မခင်ဇေယျာထွန်း၊ မခင်မာလာထွန်း
၆၇ Mr Seow Kong Sem+မကြည်စိုး
၆၈ ဗိုလ်မှုး လင်းလင်းထက် + မသီတာဝင်း
၆၉ ဦးဝင်းတင်+ ဒေါ်လှလှသန်း မိသားစု
၇၀ ကိုတင်ထွန်းတိုး + မမော်မော်ဝင်း
၇၁ ကိုဝင်းသူရရှိန် မလင်းဇာခြည် သမီးနွေးနေခြည်ရှိန် သား နေ့သစ်လင်းရှိန် မိသားစု
၇၆ Ng Chee Chong + မဖြူဖြူသွင် son Ng Kai
၇၇ Daw Thi Thi Hlaing
၈၁ ဦးသန်းမြင့်ဦး-ဒေါ်ရီရီနိုင် သမီး မအေးမြတ်မွန်မိသားစု
၈၂ ဦးခင်မောင်မြင့် သမီး ခင်စန္ဒာဆွေ
၈၇ Ko Moe Thu (Puma Energy)
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း (November 2020)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ =၂၁၈၅၀၀၀ ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
၅၀ ကိုသက်နောင် + မဆွေဇင်ဆန်း မိသားစု
၅၆ ကိုမြစိုး+ နန်းအေးခိုင် သား ကောင်းမင်းခန် ့
၅၇ ဦးလုံးစိန်+ ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု ကောင်းမှု
၅၈ ဦးဆွန်ဆီဟုန် + ဒေါ်တင်ကြည် သမီးမကေသူလင်း
၅၉ ဦးဝေလွင်ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်သမီးကြီးPrimrose သမီးငယ်ချယ်ရီဝေမိသားစု
၆၁ ဦးမြင့်သောင်း+ ဒေါ်မူမူအောင်
၆၂ ဦးအောင်မိုး+ ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သားမင်းဟိန်းအောင်၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု
၆၃ နှစ်ဘက်သောမိဘများအမှုးထား၍ ကိုမြတ်သူအေး +မဇင်မာဝင်း သားရဲရင့်မြတ်သူ
၆၄ ကိုကျော်ဇင်ဦး + မမိုးမိုးကျော် သမီး မိုးဦးနှင်းစက် နှင့် ဝင်းလဲ့ မိသားစု
၆၅ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုထွန်းလွင်+ မအေးအေးမြင့်၊ သမီး နှင်းနန္ဒာလွင်၊ အေးသီတာလွင် မိသားစု
၆၆ မခင်ဇေယျာထွန်း၊ မခင်မာလာထွန်း
၆၈ Mr Seow Kong Sem+မကြည်စိုး
၆၉ ဗိုလ်မှုး လင်းလင်းထက် + မသီတာဝင်း
၇၀ ဦးဝင်းတင်+ ဒေါ်လှလှသန်း မိသားစု
၇၁ ကိုတင်ထွန်းတိုး + မမော်မော်ဝင်း
၇၂ ကိုဝင်းသူရရှိန် မလင်းဇာခြည် သမီးနွေးနေခြည်ရှိန် သား နေ့သစ်လင်းရှိန် မိသားစု
၇၇ Ng Chee Chong + မဖြူဖြူသွင် son Ng Kai
၇၈ Daw Thi Thi Hlaing
၇၉ ကွယ်လွန်သွားသော အဘိုးအဘွားနှင့် မိဘနှစ်ပါး အားရည်စူး၍ ကိုစန်းအေး
၈၂ ဦးသန်းမြင့်ဦး-ဒေါ်ရီရီနိုင် သမီး မအေးမြတ်မွန်မိသားစု
၈၃ ဦးခင်မောင်မြင့် သမီး ခင်စန္ဒာဆွေ
၈၅ ဦးခင်ဇော်။ဒေါ်မြမြဝင်း သား ကိုဘုန်းမြင့်ကျော်
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း (October 2020)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ ၂၁၁၅၀၀၀ ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
၈၆ မသိဂီင်္စန်းမှ ဖခင်ကြီး ဦးကျင်စန်း ကွယ်လွန်ခြင်း ၁၁ နှစ်ပြည့် ရည်စူးကုသိုလ်
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း (September 2020)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ (S$၂၁၂၅ x ၉၅၀) =၂၀၁၈၇၅၀ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
၄၁ ဦးစံမာ+ဒေါ်ဒေါင်း သမီး မဝင်းဝင်းမြင့် မိသားစု
၄၄ ကိုမင်းထွဋ် ဝင်း + မချိုနှင်းအေး
၄၅ ကိုသစ်လွင်ထွန်း+မယဉ်သော်တာ သား သော်ဇေထွန်း
၄၉ ကိုသက်နောင် + မဆွေဇင်ဆန်း မိသားစု
၇၉ ကိုသက်ဝင်းမောင် + မဇင်မျိုးဌေး
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း (August 2020)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ (S$၂၁၇၈X ၉၈၀.၂၅) =၂၁၃၅၀၀၀ ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
ကိုမျိုးခိုင်စိုး+ မအေးစုမွန် သား ကောင်းဉာဏ်ဟိန်း မိသားစု
ဦးစိုးမြင့် + ဒေါ်မြငွေ မိသားစု
၃၈ ကိုကျော်ရွှေအောင် + မလင်းလဲ့ဖြူအောင်ချို သား ဟိန်းဒီပါအောင်
၄၀ ဦးစံမာ+ဒေါ်ဒေါင်း သမီး မဝင်းဝင်းမြင့် မိသားစု
၄၃ ကိုမင်းထွဋ် ဝင်း + မချိုနှင်းအေး
၄၄ ကိုသစ်လွင်ထွန်း+မယဉ်သော်တာ သား သော်ဇေထွန်း
၄၆ ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင်တင်ခိုင်
၄၇ ကိုထွန်းအောင်ကျော် + မစောမြင့်သွယ် ၊သား ထက်မြက်ထွန်း မိသားစု
၄၈ ကိုသက်နောင် + မဆွေဇင်ဆန်း မိသားစု
၅၄ ကိုမြစိုး+ နန်းအေးခိုင် သား ကောင်းမင်းခန် ့
၅၅ ဦးလုံးစိန်+ ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု ကောင်းမှု
၅၆ ဦးဆွန်ဆီဟုန် + ဒေါ်တင်ကြည် သမီးမကေသူလင်း
၅၇ ဦးဝေလွင်ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်သမီးကြီးPrimrose သမီးငယ်ချယ်ရီဝေမိသားစု
၅၉ ဦးမြင့်သောင်း+ ဒေါ်မူမူအောင်
၆၀ ဦးအောင်မိုး+ ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သားမင်းဟိန်းအောင်၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု
၆၁ နှစ်ဘက်သောမိဘများအမှုးထား၍ ကိုမြတ်သူအေး +မဇင်မာဝင်း သားရဲရင့်မြတ်သူ
၆၂ ကိုကျော်ဇင်ဦး + မမိုးမိုးကျော် သမီး မိုးဦးနှင်းစက် နှင့် ဝင်းလဲ့ မိသားစု
၆၃ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုထွန်းလွင်+ မအေးအေးမြင့်၊ သမီး နှင်းနန္ဒာလွင်၊ အေးသီတာလွင် မိသားစု
၆၄ မခင်ဇေယျာထွန်း၊ မခင်မာလာထွန်း
၆၆ Mr Seow Kong Sem+မကြည်စိုး
၆၇ ဗိုလ်မှုး လင်းလင်းထက် + မသီတာဝင်း
၆၈ ဦးဝင်းတင်+ ဒေါ်လှလှသန်း မိသားစု
၆၉ ကိုတင်ထွန်းတိုး + မမော်မော်ဝင်း
၇၀ ကိုဝင်းသူရရှိန် မလင်းဇာခြည် သမီးနွေးနေခြည်ရှိန် သား နေ့သစ်လင်းရှိန် မိသားစု
၇၅ Ng Chee Chong + မဖြူဖြူသွင် son Ng Kai
၇၆ Daw Thi Thi Hlaing
၇၇ ကွယ်လွန်သွားသော အဘိုးအဘွားနှင့် မိဘနှစ်ပါး အားရည်စူး၍ ကိုစန်းအေး
၇၈ ကိုသက်ဝင်းမောင် + မဇင်မျိုးဌေး
၈၀ ဦးသန်းမြင့်ဦး-ဒေါ်ရီရီနိုင် သမီး မအေးမြတ်မွန်မိသားစု
၈၁ ကိုမိုးသူ (Purma Energy)
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း (July 2020)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ (S$၂၁၅၀ x ၉၈၁) =၂၀၈၄၆၂၅ကျပ်ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
၅၅ မအေးဆု မွန်
၈၀ ကိုသက်ဝင်းမောင် + မဇင်မျိုးဌေး
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း (June 2020)
၇၉ ကွယ်လွန်သူ ဖခင်ကြီး ဦးအောင်ပြန့် အား ရည်စူး၍ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှူးထား၍ ကိုအောင်သန်းထွေး+မအိသူအောင် မိသားစု
၈၀ ဦးခင်ဇော်၊ဒေါ်မြမြ၀င်း သား ဘုန်းမြင့်ကျော်
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း (May 2020)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ (S$၂၂၅၀ x ၉၈၂) =၂၂၀၉၅၀၀ ကျပ်ကို ၀၁/၀၆/၂၀၂၀ တွင် ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
ကိုသက်ဝင်းမောင် + မဇင်မျိုးဌေး
၅၃ Archi group
၅၅ ကိုတင်အောင်ထူး+ မသဲမြတ်စု
၅၆ ကိုနေဦး + မဇာခြည်အေး မိသားစု
၅၇ မတင်တင်ခိုင်၊ မကျင်ကျင်ရီ၊ ကိုခိုင်ဇော်ထက်
၅၈ ကိုမြစိုး+ နန်းအေးခိုင် သား ကောင်းမင်းခန် ့
၅၉ မအေးဆု မွန်
၆၀ ဦးလုံးစိန်+ ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု ကောင်းမှု
၆၁ ဦးဆွန်ဆီဟုန် + ဒေါ်တင်ကြည် သမီးမကေသူလင်း
၆၂ ဦးဝေလွင်ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်သမီးကြီးPrimrose သမီးငယ်ချယ်ရီဝေမိသားစု
၆၄ ဦးမြင့်သောင်း+ ဒေါ်မူမူအောင်
၆၅ ဦးအောင်မိုး+ ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သားမင်းဟိန်းအောင်၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု
၆၆ နှစ်ဘက်သောမိဘများအမှုးထားရျပ် ကိုမြတ်သူအေး +မဇင်မာဝင်း သားရဲရင့်မြတ်သူ
၆၇ ကိုကျော်ဇင်ဦး + မမိုးမိုးကျော် သမီး မိုးဦးနှင်းစက် နှင့် ဝင်းလဲ့ မိသားစု
၆၈ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုထွန်းလွင်+ မအေးအေးမြင့်၊ သမီး နှင်းနန္ဒာလွင်၊ အေးသီတာလွင် မိသားစု
၆၉ မခင်ဇေယျာထွန်း၊ မခင်မာလာထွန်း
၇၂ Mr Seow Kong Sem+မကြည်စိုး
၇၃ ဗိုလ်မှုး လင်းလင်းထက် + မသီတာဝင်း
၇၄ ဦးဝင်းတင်+ ဒေါ်လှလှသန်း မိသားစု
၇၅ ကိုတင်ထွန်းတိုး + မမော်မော်ဝင်း
၇၇ ကိုဝင်းသူရရှိန်+မလင်းဇာခြည် သမီးနွေးနေခြည်ရှိန် သား နေ့သစ်လင်းရှိန် မိသားစု
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း (April 2020)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ (S$၂၁၈၀ x ၉၇၉) =၂၁၃၄၂၂၀ ကျပ်ကို ၃၀/၀၄/၂၀၂၀ တွင် ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
ကို ပြည့် ဖြိုးမောင် + မခင်သန္တာလွင်
၄၁ ကိုကျော်ရွှေအောင် + မလင်းလဲ့ဖြူအောင်ချို သား ဟိန်းဒီပါအောင်
၄၉ ချမ်းဝေ ဆေးဆိုင် မိသားစု
၅၀ ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင်တင်ခိုင်
၅၁ ကိုထွန်းအောင်ကျော် + မစောမြင့်သွယ် ၊သား ထက်မြက်ထွန်း မိသားစု
၅၂ ကိုသက်နောင် + မဆွေဇင်ဆန်း မိသားစု
၅၃ ကိုလှမျိုးဦး + မချိုချိုမာ
၅၆ Archi group
၅၆ ကိုတင်အောင်ထူး+ မသဲမြတ်စု
၅၇ ကိုနေဦး + မဇာခြည်အေး မိသားစု
၅၈ မတင်တင်ခိုင်၊ မကျင်ကျင်ရီ၊ ကိုခိုင်ဇော်ထက်
၅၉ ကိုမြစိုး+ နန်းအေးခိုင် သား ကောင်းမင်းခန် ့
၆၀ မအေးဆု မွန်
၆၁ ဦးလုံးစိန်+ ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု ကောင်းမှု
၆၂ ဦးဆွန်ဆီဟုန် + ဒေါ်တင်ကြည် သမီးမကေသူလင်း
၆၄ ဦးဝေလွင်ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်သမီးကြီးPrimrose သမီးငယ်ချယ်ရီဝေမိသားစု
၆၆ ဦးမြင့်သောင်း+ ဒေါ်မူမူအောင်
၆၇ ဦးအောင်မိုး+ ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သားမင်းဟိန်းအောင်၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု
၆၈ နှစ်ဘက်သောမိဘများအမှုးထားရျပ် ကိုမြတ်သူအေး +မဇင်မာဝင်း သားရဲရင့်မြတ်သူ
၆၉ ကိုကျော်ဇင်ဦး + မမိုးမိုးကျော် သမီး မိုးဦးနှင်းစက် နှင့် ဝင်းလဲ့ မိသားစု
၇၀ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုထွန်းလွင်+ မအေးအေးမြင့်၊ သမီး နှင်းနန္ဒာလွင်၊ အေးသီတာလွင် မိသားစု
၇၁ မခင်ဇေယျာထွန်း၊ မခင်မာလာထွန်း
၇၄ Mr Seow Kong Sem+မကြည်စိုး
၇၅ ဗိုလ်မှုး လင်းလင်းထက် + မသီတာဝင်း
၇၆ ဦးဝင်းတင်+ ဒေါ်လှလှသန်း မိသားစု
၇၇ ကိုတင်ထွန်းတိုး + မမော်မော်ဝင်း
၇၈ ဦးသိန်းရွှေ+ ဒေါ်စန်းစန်းငွေ မိသားစု
၈၁ ကိုအောင်သန်းထွေး+မအိသူအောင် မိသားစု
၈၂ ဦးသန်းမြင့်ဦး+ ဒေါ်ရီရီနိုင် သမီး မအေးမြတ်မွန်း
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း (March 2020)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ (S$၂၀၃၀ x ၁၀၁၆) =၁၉၅၈၉၅၀ ကျပ်ကို ၀၆/၀၄/၂၀၂၀ တွင် ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
Suriya Sun Pte. Ltd.
၄၂ ကိုကျော်ရွှေအောင် + မလင်းလဲ့ဖြူအောင်ချို သား ဟိန်းဒီပါအောင်
၄၄ ဦးစံမာ+ဒေါ်ဒေါင်း သမီး မဝင်းဝင်းမြင့် မိသားစု
၄၇ ကိုမင်းထွဋ် ဝင်း + မချိုနှင်းအေး
၄၈ ကိုသစ်လွင်ထွန်း+မယဉ်သော်တာ သား သော်ဇေထွန်း
၅၀ ချမ်းဝေ ဆေးဆိုင် မိသားစု
၅၁ ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင်တင်ခိုင်
၅၂ ကိုထွန်းအောင်ကျော် + မစောမြင့်သွယ် ၊သား ထက်မြက်ထွန်း မိသားစု
၅၃ ကိုသက်နောင် + မဆွေဇင်ဆန်း မိသားစု
၅၄ ကိုလှမျိုးဦး + မချိုချိုမာ
၅၈ ကိုတင်အောင်ထူး+ မသဲမြတ်စု
၅၉ ကိုနေဦး + မဇာခြည်အေး မိသားစု
၆၀ မတင်တင်ခိုင်၊ မကျင်ကျင်ရီ၊ ကိုခိုင်ဇော်ထက်
၆၁ ကိုမြစိုး+ နန်းအေးခိုင် သား ကောင်းမင်းခန် ့
၆၂ မအေးဆု မွန်
၆၃ ဦးလုံးစိန်+ ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု ကောင်းမှု
၆၄ ဦးဆွန်ဆီဟုန် + ဒေါ်တင်ကြည် သမီးမကေသူလင်း
၆၆ ဦးနေလင်း + ဒေါ်ဥမ္မာတင် မိသားစု
၆၇ ဦးဝေလွင်ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်သမီးကြီးPrimrose သမီးငယ်ချယ်ရီဝေမိသားစု
၆၉ ဦးမြင့်သောင်း+ ဒေါ်မူမူအောင်
၇၀ ဦးအောင်မိုး+ ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သားမင်းဟိန်းအောင်၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု
၇၁ နှစ်ဘက်သောမိဘများအမှုးထားရျပ် ကိုမြတ်သူအေး +မဇင်မာဝင်း သားရဲရင့်မြတ်သူ
၇၂ ကိုကျော်ဇင်ဦး + မမိုးမိုးကျော် သမီး မိုးဦးနှင်းစက် နှင့် ဝင်းလဲ့ မိသားစု
၇၃ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုထွန်းလွင်+ မအေးအေးမြင့်၊ သမီး နှင်းနန္ဒာလွင်၊ အေးသီတာလွင် မိသားစု
၇၄ မခင်ဇေယျာထွန်း၊ မခင်မာလာထွန်း
၇၇ Mr Seow Kong Sem+မကြည်စိုး
၇၈ ဗိုလ်မှုး လင်းလင်းထက် + မသီတာဝင်း
၇၉ ဦးဝင်းတင်+ ဒေါ်လှလှသန်း မိသားစု
၈၀ ကိုတင်ထွန်းတိုး + မမော်မော်ဝင်း
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း (February 2020)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ (S$၁၉၇၀x ၁၀၁၆) =၂၀၀၁၅၀၀ ကျပ်ကို ၀၂/၀၃/၂၀၂၀ တွင် ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
၇၇ Ng Chee Chong + မဖြူဖြူသွွင်
လစဉ် ဆွမ်း အလှူရှင်စာရင်း (January 2020)
Update: စုစုပေါင်း ဆွမ်းအလှူငွေ (S$၁၉၈၀x ၁၀၈၀) =၂၀၅၅၂၄၀ ကျပ်ကို ၀၇/၀၂/၂၀၂၀ တွင် ပေးပို့ လှူဒါန်း ပါသည်။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု
၄၃ Mr Seow Kong Sem + မကြည်စိုး
၄၅ ဦးစံမာ+ဒေါ်ဒေါင်း သမီး မဝင်းဝင်းမြင့် မိသားစု
၄၈ ကိုမင်းထွဋ် ဝင်း + မချိုနှင်းအေး
၄၉ ကိုသစ်လွင်ထွန်း+မယဉ်သော်တာ သား သော်ဇေထွန်း
၅၁ ချမ်းဝေ ဆေးဆိုင် မိသားစု
၅၂ ကိုစိုးစိုးစံ+ မတင်တင်ခိုင်
၅၃ ကိုထွန်းအောင်ကျော် + မစောမြင့်သွယ် ၊သား ထက်မြက်ထွန်း မိသားစု
၅၄ ကိုသက်နောင် + မဆွေဇင်ဆန်း မိသားစု
၅၅ ကိုလှမျိုးဦး + မချိုချိုမာ
၅၇ Archi group
၅၉ ကိုတင်အောင်ထူး+ မသဲမြတ်စု
၆၀ ဦးသိန်းရွှေ+ ဒေါ်စန်းစန်းငွေ မိသားစု
၆၁ ကိုနေဦး + မဇာခြည်အေး မိသားစု
၆၂ မတင်တင်ခိုင်၊ မကျင်ကျင်ရီ၊ ကိုခိုင်ဇော်ထက်
၆၃ ကိုမြစိုး+ နန်းအေးခိုင် သား ကောင်းမင်းခန် ့
၆၄ Ng Chee Chong + မဖြူဖြူသွွင်
၆၅ Ng Kai (ခေါ်) သျှမ်း လျှံ ဇန်
၆၆ မအေးဆု မွန်
၆၇ ဦးလုံးစိန်+ ဒေါ်ဌေးဌေးရီ မိသားစု ကောင်းမှု
၆၈ ဦးဆွန်ဆီဟုန် + ဒေါ်တင်ကြည် သမီးမကေသူလင်း
၇၀ ဦးနေလင်း + ဒေါ်ဥမ္မာတင် မိသားစု
၇၁ ဦးဝေလွင်ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်သမီးကြီးPrimrose သမီးငယ်ချယ်ရီဝေမိသားစု
၇၃ ဦးမြင့်သောင်း+ ဒေါ်မူမူအောင်
၇၄ ဦးအောင်မိုး+ ဒေါ်သင်းသင်းလွင် သားမင်းဟိန်းအောင်၊ ဇော်ထွဋ်အောင် မိသားစု
၇၅ နှစ်ဘက်သောမိဘများအမှုးထားရျပ် ကိုမြတ်သူအေး +မဇင်မာဝင်း သားရဲရင့်မြတ်သူ
၇၆ ကိုကျော်ဇင်ဦး + မမိုးမိုးကျော် သမီး မိုးဦးနှင်းစက် နှင့် ဝင်းလဲ့ မိသားစု
၇၇ နှစ်ဖက်သောမိဘများအား အမှုးထား၍ ကိုထွန်းလွင်+ မအေးအေးမြင့်၊ သမီး နှင်းနန္ဒာလွင်၊ အေးသီတာလွင် မိသားစု
၇၈ မခင်ဇေယျာထွန်း၊ မခင်မာလာထွန်း